राजनीति – Page 44 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
नयाँ शक्तिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले किन दिए राजिनामा कारण यस्तो छ
काठमाडौं १३ साउन । नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता तथा सञ्चार विभाग प्रमुख खिमलाल देवकोटाले पदबाट राजिनामा दिएका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उपलब्धि हात पार्न नसकेपछि पदमा रहिरहनु आवश्यक नरहेको भन्दै राजिनामा दिएका हुन । देवकोटाले साउन १० गते नै पार्टी..
नेपाली कांग्रेस कन्काइ नगरपालिकाले गर्यो ८ जनालाई कारबाहीको सिफारिस
काठमाडौं १२ साउन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफना पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग तथा अन्तर्घात गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेस कनकाई नगर समितिले ८ जनालाई कारबाही गर्ने भएको छ । समितिले कारबाहीका लागि ८ जनालाई सिफारिस समेत गरेको छ। पार्टीका कनकाई नगरसभापति..
भरतपुर मतगणना विवादको रिटमाथिको सुनुवाइ भएन
काठमाडौ १२ साउन । आज सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्ने भनेको भरतपुरको मतपत्र च्यातिएको सम्बन्धीको मुद्धा सुनुवाइ हुन सकेन । जसका कारण आज पनि हेर्दाहेर्दैको सुचीमा आइतबारको सूचीमा राखियो । न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त..
भरतपुरमा मतपत्र च्यातिएको विषयमा अदालतमा आज सुनुवाइ
काठमाडौं १२ साउन । भरतपुरको मतपत्र च्यातिएको बिषयमा सर्वोच्च अदालतले आज सुुनुवाइ गर्दैछ । गएको मंगलबार न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी र ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशमा रहेको मुद्दालाई नभ्याइएको भन्दै हेर्दाहेर्दैमा राखिएकोमा बिहीबार सुनुवाइ हुन लागेको..
एमालेद्वारा अन्तर्घात गर्ने र बागी उठनेलाई कारवाही, को-को परे कारबाहीमा ?
काठमाडौं १२ साउन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफनो पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने, अन्तर्घात गर्ने तथा बागी उम्मेदवारी दिनेलाई नेकपा एमाले भोजपुरले कारबाही गरेको छ । चुनावको क्रमममा अन्तर्घात र पार्टीले उठाएको उम्मेदवारका विरुद्ध बागी उठने नेता..
सोलुखुम्बुको लिखुपिकेमा सात मतले हारेपछि अदालतमा रिट, विजयीको पक्षमा अदालतको निर्णय
सोलुखुम्बु १२ साउन । सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखु पिकेमा निर्वाचनमा आफु हारेपछि अदालत पुगेका सूर्यबहादुर बस्नेतको रीटउपर कारबाही भएको छ । नवनिर्वाचित वडा सदस्य मणिराज बस्नेत विरुद्ध दायर रिटमा बुधबार पहिलोपटक सुनुवाई भएको छ । उच्च अदालत विराटनगरको अस्थायी..
मन्त्रिपरिषदमा १९ मंत्री थपिए, कुन मंत्री कस्ता ?
काठमाडौं, ११ साउन । आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन । । बुधबार कांग्रेसबाट १० जना, माओवादीबाट ६, फोरमबाट २ र नेकपा संयुक्तबाट एक जना गरी जम्मा १९ जना मन्त्री थपिएका हुन् । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपति विद्यादेवि..
विवेकशील र साझा पाटी आज एकीकरण हुदै
काठमाडौं ११ साउन । विवेशील नेपाली दल र साझा पार्टीबीच आज एकीकरण हुदैछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा यी दुवै दल वैकल्पिक दलको रुपमा सहभागी भएका थिए । दुइ चरणको निर्वाचनमा यि दल छुट्टा छुट्टै तरिकाबाट जाँदा आपेक्षा गरे अनुसार नतिजा नआएपछि तेश्रो चरणको..
काठमाडौ ११, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भएका छन । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद भएपछि देउवाले मंगलबार मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न सकेका थिएनन । राष्ट्रपति कार्यालयमा मंगलबार ४ देखि ५ बजेसम्म मन्त्रीको शपथ..
यस कारण हुन सकेन मंगलबार मन्त्रिमण्डल विस्तार
काठमाडौं १० साउन । मंगलबार मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिए पनि कांग्रेस पार्टीभित्र कुरा नमिल्दा विस्तार हुन सकेन । सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने चार जनाको नाम दिन पार्टी वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गरेको..